Sidee loo Sameeyaa Akoon Telegram-ka nambar la'aan? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo sameeyaa xisaab Telegram lambar la'aan?
April 28, 2021 0 comments 372
Haddii aad u maleyneysay inay muhiim tahay inaad haysato lambar taleefan si aad akoon uga sameysato arjiga Telegram, aan kuu sheegno inaad khaldantay. Hadda waxaad haysataa ikhtiyaarka ah helitaanka barxadda adigoon haysan lambar. Baro sida loo sameeyo maqaalka soo socda.
Telegram wuxuu sii wadaa shaqada si uu u siiyo dhammaan heerarka amniga dhammaan adeegsadayaasha. Horeba uma baahnid inaad siisid lambarka taleefankaaga shisheeye kasta si ay kuugu dari karaan liiska xiriirkooda. Hadda waa suurtagal in lagu sameeyo habab kale oo aan hoos ku sharraxno.
Ma isdiiwaangelin karaa lambar la'aan?
Waxaa jira jahwareer badan oo ku saabsan, si kastaba ha ahaatee runta ayaa ah in aysan jirin wax suurtagal ah oo lagu diiwaan gelin karo Telegram iyada oo aan lahayn lambar taleefan. Dhamaan isticmaaleyaasha doonaya inay akoon ku abuuraan codsigan waa inuu muujiyaa lambar waqtiga diiwaangelinta.
Hadda, waxa suuragal noqon doona isticmaal barnaamijka adigoon lahayn lambar taleefan. Waxaad haysataa ikhtiyaar aad ku abuureyso username aad dadka siin karto si loogu daro liiska asxaabtooda adigoon shaacin lambarka taleefankaaga.
Isticmaal Telegram lambar la'aan
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno si aan u bilowno isticmaalka Telegram lambar la'aan waa inaad kala soo baxdo arjiga. Tani waa mid aad u fudud oo dhakhso badan, kuma qaadan doonto daqiiqado badan.
Waa inaad tagtaa bakhaarka app-ka ee nidaamkaaga qalliinka oo aad ka raadsataa codsiga Telegram. Kaliya waxaad riixi doontaa rakib, oo diyaar ah. Codsiga waxaa si guul leh loogala soo bixi doonaa taleefankaaga gacanta.
Hadda waa waqtigii la abuuri lahaa xisaab lagu bilaabo isticmaalka Telegram. Waqtiga diiwaangelinta waxaad u baahan doontaa lambar taleefan, maadaama arjiga uu kuu soo diri doono lambar sms ah si loo xaqiijiyo koontada.
Markaas waad iska iloobi kartaa lambarka. Mar dambe uma baahnid inaad u adeegsato arjigaXitaa waxaad heli doontaa ikhtiyaarka ah inaad isticmaasho Telegram adigoon haysan kaarka SIM-ka ee lagu dhex dhisay Smartphone-kaaga.
Samee Telegram taleefan la'aan
Haddii aad rabto in dadka kale ay kugu dari karaan liistada xiriirkooda iyaga oo aan shaacin lambarka taleefankaaga waa inaad abuurtaa username:
Duub shaashadda bidix ilaa midig
Dhowr xulasho ayaa la soo bandhigi doonaa. Waa inaad doorataagoobaha"
Markaad doorato "Magaca”Oo qor magacyada aad rabto in lagugu aqoonsado Telegram
Hadda dadku awoodi doonaan inay kugu helaan magacaas oo ay kugu daraan liiska asxaabtooda. Muhiim ma noqon doonto in la yiraahdo nambarka taleefankeena.
Faa'iidooyinka sameynta akoon Telegram aan lambar lahayn
Samee koontadeena Telegram lambar la'aan Waxay noo keeneysaa faa iidooyin taxane ah oo aan caadi ahayn, oo ay ugu muhiimsan tahay nabadgelyadeena. Dadku hadda waxay awoodi doonaan inay arkaan magacaaga isticmaale oo sinnaba uma heli doonaan lambarka taleefankaaga.
Waxa kale oo aad ikhtiyaar u leedahay inaad isticmaasho Telegram lambar la'aan, taasi waa Muhiim maahan inaad haysato kaarka SIM-ka mobilka si aad uhesho arjiga, mar haddii aan dhammeynay diiwaangelinta bilowga ah.
1 Ma isdiiwaangelin karaa lambar la'aan?
2 Isticmaal Telegram lambar la'aan
3 Samee Telegram taleefan la'aan
4 Faa'iidooyinka sameynta akoon Telegram aan lambar lahayn
Sidee loo tirtiraa fiidiyowga YouTube-ka?
Sidee loo beddelaa macluumaadkeyga twitter-ka?